Difaacayaasha Xuquuqda aadamiga oo wargeyska Haatuf ku tilmaamay arrintiisa mid baalmarsan anshaxa saxaafadda - Somaliland Post
Home News Difaacayaasha Xuquuqda aadamiga oo wargeyska Haatuf ku tilmaamay arrintiisa mid baalmarsan anshaxa...
Difaacayaasha Xuquuqda aadamiga oo wargeyska Haatuf ku tilmaamay arrintiisa mid baalmarsan anshaxa saxaafadda
Hargaysa(SPOST):-Afhayeenka Ururrada Xuquuqal Insaanka Somaliland Saleebaan Ismaaciil Bulaale (Saleebaan Xuquuq), ayaa hab-dhaqanka Wargayska madaxa-banaan ee HAATUF ku tilmaamay mid ka leexsan Anshaxa Saxaafadda xorta, isla markaana si cad ugu sifoobay inuu Shaqsiyaad dhinaca saaro
Mr Saleebaan Xuquuq warfideenada kula hadlay Caasimadda Hargaysa, ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka ka dhex taagan Wargayska Haatuf iyo Xukuumadda, kaasoo uu sheegay inuu dano dhaqaale salka ku hayo, kadib markii ay baadhis ku sameeyeen eedihii uu Wargayska HAATUF soo daabacay, waxaanu yidhi “Waxaanu bulshada u cadaynaynaa in dagaalka ka dhex oogan Warbaahinta Haatuf iyo Xukuumaddu aanu khusaynin arrimo saxaafadeed, balse ay salka ku hayso dano dhaqaale. Difaacayaasha xuquuqda aadamiga Somaliland waxay u arkaan Xalka kiiskani inuu ku jiro Dacwad si Madani ah loogu soo oogo Madaxda ama Maamulka Wargayska, balse aanay habboonayn in gebi ahaanba la xidho, waxaanan ku baaqaynaa in fursad loo siiyo iska difaacidda dacwadaas iyo inay Qareeno qabsadaan.” Ayuu yidhi Saleebaan Xaquuq.
Waxa uu Saleebaan Xuquuq sheegay in Guddoomiye Yuusuf cabdi Gaboobe uu Nin ay qaraabo yihiin oo uu magaciisa ku sheegay Yuusuf Cabdilaahi Cumar uu la doonayey in qandaraas dilaalis lagu siiyo Block-yo ku yaalla Somaliland, taasina tahay meesha la iska raacay wasiirka Macdanta. Waxa uu ku adkaystay inaanay jirin Saxaafad lagu xadgudbay iyo xorriyatul qawl lagu tuntay, balse ay arrintu tahay mid salka ku hayso dano dhaqaale oo Masuuliyiinta wargeyska Haatuf iyo Wasaaradda Macdantu isku afgaran waayeen.
Saleebaan Xuquuq ayaa si cad u sheegay in qoraalo iska daba dhacayey oo wargeyska Haatuf iyo Websayt-kiisa Lagu baahinayey ay ahaayeen kuwo baalmarsan anshaxa suuban ee saxaafadda iyo milgaha warbaahineed.
Ugu dambayntii waxa uu Saleebaan Xuquuq ku eedeeyey xukuumadda inay Albaabada iskugu dhufato xarunta Wargeyska Haatuf, waxana uu Xukuumadda ugu baaqay Inay Meheradda Furto oo ay dacwaddeeda wadato, halka uu masuuliyiinta wargeyskana ugu baaqay inay ka Xaadiraan Dacwadaha loo haysto.